Izityalo ezi-5 ezijingayo zokongeza umbala kwiifestile kunye neebhalkhoni | Bezzia
UMaria vazquez | 14/06/2022 12:00 | Ikhaya
Beka izityalo ezijingayo kwiifestile Itshintsha ngokupheleleyo i-facades. Izisa umbala kunye novuyo kwaye izenza zibe nomtsalane ngakumbi. Bafuna ukuzinikela okuthile, kodwa ngubani ongakonwabeli ukucamngca ngeebhalkhoni ezizele ziintyatyambo ngelixa ukhenketha ijografi yethu ngeli xesha lonyaka?
Zininzi izityalo esinokukhazimla ngazo iibhalkhoni zethu ukusuka entwasahlobo ukuya ekwindla. Nangona kunjalo, phakathi ukulenga izityalo sifumene ezinye zeentandokazi zethu. Izityalo ezineentyatyambo ezinemibala eqaqambileyo ezifuna ukhathalelo olwahlukileyo.
ISurfinia sisityalo sangaphandle esixhaphake kakhulu ngenxa yokulinywa kwayo lula. Bangabentsapho yakwaSolanaceae abazalelwa eMzantsi Melika kwaye yenye yezona ntlobo zinamandla zepetunias. Iimpawu zobukho bazo obujingayo Iintyatyambo ezimile okwexilongo enokuba nemibala eyahlukeneyo kunye nemiphetho egudileyo kunye ne-wavy.
Esi sityalo sikhula kwi-clumps kwaye sinjalo ilungele ukukhula kwiimbiza kunye nezityalo. Apho ihlobo lishushu kakhulu, kungcono ukuba uwabeke kwindawo engaphantsi komthunzi, uqinisekisa ubuncinci beeyure ezintandathu zelanga ngosuku, kukhethwa ukuba kusasa. Kukulungele xa utyala ukongeza isichumisi esicothayo sezityalo zeentyantyambo kwi-substrate kwaye ngoJulayi, emva kweentyantyambo zabo zokuqala, yenza i-pruning elula yezona ziqu zide (kungekho ngaphezu kwe-20%) ukugcina imilo yazo.
ICalibrachoa luhlobo lwezityalo ezingapheliyo ze usapho olunye njengee-surfinias evelisa, ukusuka entlakohlaza ukuya ekupheleni kwehlobo, iintyatyambo ezincinci ezimile okwentsimbi. Umkhwa wayo wokukhula uyarhubuluza kwaye ngoko ke amasebe ayo kunye neentyatyambo ziya kuxhoma ukuba ityalwe embizeni okanye kwingobozi ekuphakameni kwayo.
ICalibrachoa sisityalo esinobude obungagqithiyo kwi-20 cm. iintyatyambo zayo zincinci kodwa idubula kakhulu kwaye ininzi kakhulu ukuba ifumana iiyure eziyimfuneko zelanga. Njengee-surfinias, eyona nto ifanelekileyo kukufumana eli langa kusasa kwaye uhlale emthunzini emva kwemini.
Banike amanzi acocekileyo; Kokubini ukugqithisa kunye nokungabikho kwamanzi kunokuba yingozi. Y bamba iziqu pUkufezekisa izihlahla ezixineneyo kunye neentyantyambo ezinkulu. Phakathi kweentlobo ezininzi, i'Million Bells' Calibrachoas yenye yezona ntyatyambo zininzi.
I-ivy okanye i-gitanilla geranium yenye yezona ntlobo zidumileyo zokufaka imibala kwiifestile kunye neebhalkhoni. Sisityalo esinganyangekiyo, egcina iintyatyambo zayo de kube lixesha lasebusika ukuba inikwe iiyure ezaneleyo zokukhanya kwelanga. Zinokubekwa elangeni eligcweleyo kodwa kunokuba lula ukuzenza kwi-semi-shade. Ziyakwazi ukumelana namaqondo obushushu ukuya kwi 30º kodwa hayi amaqondo angaphantsi kwe 5 degrees ngaphandle kokhuseleko.
Entwasahlobo nasehlotyeni kufuneka unkcenkceshele i-geraniums rhoqo, uqaphele ukuchithwa kwamanzi. Ngeli xesha, ukongeza, kuya kuba lula ukubandakanya ezinye isichumisi sezityalo ezidubulayo qho ngeentsuku ezili-15.
Ngaba ifestile yakho ifumana iiyure ezimbalwa zelanga? I-Fuchsias yenye yezityalo ezimbalwa ezijingayo zeentyatyambo onokuthi uzibeke embizeni kunye emthunzini. Baza kufuna, ewe, iiyure ezimbalwa zelanga ukuze bachume. Isithathu sinokwanela. IFuchsias ikwaxhasa iqabaka. Xa ubusika bufika ziya kuphulukana namagqabi neentyatyambo, kodwa ziya kuphuma kwakhona entlakohlaza.
Ezinye iintlobo ze-fuchsia zi-bushy kwaye zikhula ngokuthe tye, kodwa uya kufumana ezinye zijinga. I-substrate etyalwe kuyo kufuneka ibe ne-acidic kancinane kwaye ibe ne-porous ukuze kube lula ukukhupha amanzi. Ngokumalunga nokunkcenkceshela, oku kufuneka kube kuninzi ngexesha leentyatyambo, ukuze umhlaba uhlala ufumile (hayi amanzi).
i-aphtemia yi-a ezirhubuluzayo ezinencasa kunye nophuhliso olukhawulezayo oluvela eAfrika. Amagqabi ayo aluhlaza kwaye anenyama kwaye i-inflorescences yayo i-pink ngokubanzi, nangona kunokwenzeka ukufumana iintlobo ezibomvu okanye ezimhlophe. Iphindaphindeka ngokulula kakhulu; usike nje iqhekeza lesityalo kwaye ulincamathele ngqo emhlabeni.
Sisityalo esifuna ukukhanya okukhulu, nangona sinyamezela iindawo ezinomthunzi. nyamezela imbalela, nangona iya kudubula iintyatyambo ngcono ngokunkcenkceshelwa okuninzi kwaye rhoqo ukuba ibonelelwe kakuhle. Ayizixhasi iiqabaka eziqhubekayo, kodwa iyakwazi ukumelana namaqondo obushushu ukuya kutsho kwi -5ºC. Kuya kukwanela ukukhusela kwiindawo ezibandayo kunye nengubo ye-thermal ebusika ukuze ujabulele kwakhona entwasahlobo.
Kwezi zityalo zijingayo zeziphi othanda kakhulu ukuhombisa ibhalkhoni yakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Izityalo ezi-5 ezijingayo zokongeza umbala kwiifestile kunye neebhalkhoni